Niakatra ny hetra sy ny haba ary ny hofan-tsena… : mifanenjana ny mpanolotsaina sy ny kaominina Antananarivo | NewsMada
Niakatra ny hetra sy ny haba ary ny hofan-tsena… : mifanenjana ny mpanolotsaina sy ny kaominina Antananarivo
Ifanjevoana tanteraka. Nitondra ny fahitany ny fitantanana ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny mpanolotsain’ny tanàna, ivelan’ny Tim manoloana ireo fanapahan-kevitray ny mpanatanteraka eo anivon’ny fiadidina ny Tanàna.
« Nivoaka ny efitrano fivoriana izahay ary tsy nandany ny tetibola. Tsy hita taratra amin’io tetibola io ny fandaharanasa. Niakatra avo telo heny koa ny hofan’ny tsena : Analakely, Andravoahangy, Anosibe… Ireo hetra sy haba samihafa nampiakarina avokoa », hoy ny mpanolotsaina avy amin’ny Freedom, Rakotondrazafy Lalatiana tetsy Behoririka, omaly. Nohamafisiny koa fa tsy eken’izy ireo ny hitrosan’ny kaominina 60 miliara Ar fa hamatotra ny vahoaka izany. « Betsaka ny azo atao hitrandrahana ny fampidiram-bola fa tsy voatery hitrosa. Efa nambaranay ny ben’ny Tanàna izany ary tsy nandà izy, saingy nirotorotoana ny fandaniana ny tetibola raha vao niala teo Rtoa Ravalomanana Lalao », hoy Ravololomanana Lalatina.
Manoloana izany, nilaza ho tsy tompon’andraikitra amin’io tetibola io ireto mpanolotsaina ireto. Tsy mazava rahateo ilay resaka fitrosana. « Tsy hita taratra ny mangarahara. Hindramina amin’iza ary inona ny tambiny amin’ny vahoaka. Ahoana ny fomba hamerenana azy… », hoy ny mpanolotsaina, Rajerison Veronique Nicole.
Momba ny mpivarotra amoron-dalana kosa, nambaran’izy ireo fa tokony hifampitsimbinana izany, miainga amin’ny rafitra mazava, ialana amin’ny savorovoro.
Tsy anisan’izy ireo sy tsy niatrika izany kosa ny mpanolotsaina avy amin’ny Mada Vision, Ramanantsoa Harilala.
Valin-kafatry ny mpitantana ny Tanàna
Nitondra valin-kafatra avy hatrany ny mpitantana eo anivon’ny kaominina. Mijanona ho vinavina aloha ilay fitrosana, raha ny nambaran’ny lefitra voalohan’ny ben’ny Tanàna, Harison Gabriel tetsy Analakely, omaly. « Ny fanjakana no mindrana ny vola fa afindra aty amin’ny kaominina. Anisan’ny hampiasana azy maika ny fanamboaran-dalana. Eo koa ny sisin-dalana ary ny tsena », hoy izy.
Nohazavainy koa fa manaraka ny vidm-piainana sy toetry ny andro ny nampiakarana ho 30 na 50% ny hetra sy ny haba samihafa alain’ny kaominina. « Mandeha miandalana izany… », hoy ihany izy.
Etsy andaniny, manana vahaolana ny fiadidiana ny Tanàna momba ireo mpivarotra amoron-dalana. Handray an-tanana ny momba azy ireo ny Antenimieran’ny varotra sy ireo kaominina manodidina, hanohizana ny fandaminana. « Efa misy ny fifampiresahana amin’ireo mpivarotra sy ny hametrahana azy ireo. Efa nisy tsena nodiovina fa miankina amin’ireo mpivarotra. Vahaolana teknika fa tsy politika ny anay », hoy ihany izy.
Araka izany, ho tonga hatraiza izao fifanenjanana eo amin’ny mpitantana ny Tanàna sy ny mpanolotsaina sasany, ivelan’ny Tim izao ?